India: Shaheen Bagh: ndi ngagharị iwe dị mma nke na-emeghere oghere ụzọ | Akụkọ ụwa India - GELN T EGO
India: Shaheen Bagh: ndi ngagharị iwe dị mma nke na-emeghere oghere ụzọ | Akụkọ India
NEW DELHI: Ohere nke imeghe otu n'ime okporo ụzọ, nke ndị na-eme ihe ngosi enweghị Shaheen BaghNdị uwe ojii mesiri ha obi ike na nchekwa zuru oke na Fraịde. Agbanyeghị na ndị ngagharị iwe ahụ siri ọnwụ na ha agaghị akwaga ebe ha dị ugbu a, ha kwusiri ike na ọ bụ ndị uwe ojii mechiri ndị ahụ -enwu n'okporo ụzọ N’akụkụ nke ọzọ, si otú a na-enye ndị mgbasa ozi ndị SC họpụtara ka ha nwee ohere. Roadzọ a na-ebute okporo ụzọ si Noida na Delhi.
Na mmekorita nke bidoro na mgbede, ndị mgbasa ozi - Sadhana Ramachandran et Sanjay Hegde - rịba ama na emeghela ụzọ Noida na ụtụtụ Fraịde. N’iso mkparịta ụka ha na ndị na-eme ngagharị iwe a, ha gara ebe ahụ ma mesịa tụọ aro ka enwere ike imeghe ụzọ. Ndị ọka iwu abụọ ahụ chọpụtara na ihe ọtụtụ nkwupụta ndị ngagharị iwe ahụ bụ eziokwu. “Ha mepere ụzọ ahụ wee mechie ya. Hapụ ya Ndị uwe ojii Delhi ou Ndị uwe ojii Noida, anyị amaghị, mana ọ bụ n'ezie ihe ịrịba ama na enwere ike imeghe. Anyị ga-agwa SC… onye ọ bụla mere ya nwere ọrụ nke SC, ”ka ha kwuru.
“Occupnye nọrọ n’ala ọzọ ahụ? Anyị chọrọ ka o doo gị anya, ”ka ndị mgba ajụjụ ọnụ jụrụ ìgwè mmadụ ahụ. Nzaghachi ndị ahụ ejikọtara ọnụ bụ, "Ndị uwe ojii ejirila." Ramachandran gara n’ihu: “you na-ekwu na ị na-anọdụ ebe a na ndị uwe ojii Delhi emechiwo akụkụ nke ọzọ ma ị kwenyere na nke ahụ n’ihi na ị na-eche na ị nweghị nchebe n’ụzọ ahụ. ? Onye ngagharị iwe zara, "Ndị uwe ojii Delhi emechiela ogige ndị ọzọ."
Hegde wee jụọ ma enwere onye uwe ojii nọ ebe ahụ. Ndị otu SHO dị na ọdụ ndị uwe ojii Shaheen Bagh gara n'ihu wee kwe nkwa na ndị uwe ojii adịla njikere inye ndị na-eme ihe ngosi ahụ nchekwa zuru oke ma ọ bụrụ na ha ekwenye na-emekọ ihe. O kwuru na ha rịọkwara na mbụ ma kwe nkwa itinye mgbochi mgbochi na onye na-eke ya. "Hamari taraf se jo security hai woh poori denge (Anyị ga-eweta nchekwa zuru oke)," ka o kwuru.
Ìgwè ahụ gbakọtara ọnụ na-arịọ ndị uwe ojii ka ha nye ya ede na ha ga-emezu nkwa ha, ma ọ bụrụ na ihe ọghọm merenụ, ndị isi niile - site na onye na-elekọta ụlọ na onye isi - kwesịrị ịta ahụhụ nsonaazụ ya. Obi abụọ adịghị ya. "Ndị uwe ojii Delhi tiri Jamia ihe ụmụ akwụkwọ otu n’ime ha wee lefuo anya. A kpọpụrụ ụmụ akwụkwọ n'ogige ụlọ akwụkwọ site na aka ha bulie n'igwe ka a na-ekwu okwu ọjọọ, "otu nwanyị kwuru na-ekwupụta nchegbu ya.
Hegde chetara na mbido nnọkọ ahụ na ọ bụ Mahashivratri na Fraịde, nne ya na-ekwukwa na ụbọchị ahụ ọbụbụ ọnụ mmadụ ghọrọ ngọzi. Ọ gbara mbọ mee ka ndị na-eme ngagharị iwe ahụ mata na ọ dị ha mkpa ịghọta na olileanya dị, na ewezugaghị ikike ha igosipụta ya bụrụ na ha kpebiri iwepu ụzọ ahụ.
Nke a bu ụzọ pụta (na Bekee) ỤTỤ NKE INDIA
naBagh-enwu n'okporo ụzọnaIndiaprotestersozi ọmaabụghị
Anyị na-emeri ụwa nke February 21, 2020 - VIDI
Belgium: Edinam Aalst nwere ike ime ka ndaghari ohuru: olee otu anyi si bia?